Abafowunelwa kwimixholo ethi "I-Vampire Diaries" baye bahlala bephikisana ngokuya kuba ngubani oza kuba yi-heroine eyinhloko ka-Elena (Nina Dobrev): kunye noStefan, owayengumvampire wegazi, kwaye ngoku "ingelosi eguqukileyo" okanye uDamon, umzalwana wakhe ongendawo othanda ukutya igazi, kwaye ungahlali kwisidlo sokutya. Njengoko ngokuqhelekileyo kwenzeka kwiiprojekthi ezidumileyo, abadlali abasanda kudala baqala ukubonisa iireveli zenkonzo kwiisethi. Kwaye ukuba ngamaxesha okuqala iimvakalelo zothando zika-Elena noStefan zenza amahemuhemu malunga nobudlelwane phakathi kukaNina Dobrev noPaul Wesley, namhlanje le "dada" ayifanelekanga. Iimeko zaqala ukutshintsha xa ukukhwabanisa kukaDamon kwakubonakala kunqabileyo kwi-egocentrism yakhe. Yaye yintoni eyamangalisa ngayo abalandeli xa befumene ukuba ubudlelwane phakathi kukaNina noYen beqalile.
Ukususela ebuhlotsheni nothando
U-Miss Dobrev kunye noMnu Somerhalder baqwalaselwa ngokufanelekileyo ngomnye wabadlali abakhulu kunazo zonke baseHollywood, kwaye ngoko ke isibini esihle kakhulu. U-Obih inoveli ayifumananga, kwaye xa kuvela amahemuhemu okokuqala, akukho mntu wayithatha ngokubalulekileyo, ngenxa yokuba inkohlakalo ihlala ibonakala, ngamanye amaxesha nabavelisi ngokwabo, ukuze kukhuthazwe iphrojekthi okanye ngenxa yokugcina ukuthandwa kwayo, babuze abadlali ukuba badlale iimvakalelo zabo ebomini, kodwa ngeli xesha kwakungekho mfuneko ukuvelisa nantoni na .
Ekuqaleni, u-Ian noNina babengabangane kuphela, kodwa ngo-Meyi 21, 2009, xa beqala ukubonwa ndawonye kwiqela le-TV ye-CW eyayibanjwe kwi-Gramercy Park Hotel, uluntu lwaqala ukukrazula kumacangca. Isigwebo sokugqibela "sathandwa" emva kokushicilelwa komfanekiso wabo, iparazzi eyenziwa kwisikhululo seLos Angeles ngoMatshi 2010. Enyanisweni, nangona emva kokubonakala kwesithombe kumaphephandaba ukuthetha ngokuzithemba, kodwa kukho uthando alukwazi. Yonke into eyakwazi ukubamba iifoto-zintathu-ubumnandi obumnene esihlathini, obanikelwa nguYen kumntu osebenza naye kwisethi. Isenzo esinjalo esithandekayo singathathwa njengobungqina obuqhelekileyo, kuba eUnited States akuqhelekanga (kwaye kwiindawo zaseRashiya nase-Ukraine ezinokubamba okunobungane ziba ziwayo), i-anikak ayikho inkcazo yobudlova. Ngaloo xesha, abadlali bebesele bekwazi kakuhle, ngokokuba ukumana okungahambisani nabo kwakungeke kubangelise.
Inyaniso yokuba kukho ubudlelwane kubini kunye nangaphezulu - bahlakulela ukuthetha xa uNina no-Ian baqala ukubonakala kuyo yonke indawo. Yibiza ngokuba yinto engafanelekanga ukuba yayingenakwenzeka. Ababini babonwa kumdlalo kwi-basketball, umdlalo phakathi kwe-Phoenix Suns kunye neLa Lakers ekupheleni kukaMeyi 2010 wakhunjulwa yiinkatheli kunye nokubonakala kwayo kwimbali yamagosa. Ngaba yayinobungane okanye phakathi kwabadlali baxhomekeke kunxibelelwano. Kodwa ukungathandabuzeki malunga nokunyuka kwe-PR kwakhona kwaphela, okwakusandleni sikaNina no-Ian, abangazange bafune ukuchaza ubudlelwane babo.
Wonke amakhadi adluliswa
Njengoko uyazi, eUnited States ayengakholwanga i-tabloids ixesha elide, zonke iinkcukacha ezinokwethenjelwa zifakwe kumaphepha ayenayo yeenkwenkwezi, ngoko uNino Dobrev ngokwakhe wabhala amaphulo okugqibela phezu "kunye" kwingxoxo malunga nokuba kwenzekani phakathi kuka-Elena noDamon ebomini bokwenene, ukubhala kwi-Facebook nokuthumela iifoto ezidibeneyo yiYen.
Abafaki be "Vampire Diaries" bavuya. U-Somerhalder noDobrev bathetha ngokuvulekileyo ngeemvakalelo zabo, bavume ukuba abanakuhlala ngaphandle komnye.
U-Ian ebomini wayethetha ngokugqithiseleyo kunokwakheka kweqhawe ngokwemvakalelo, ngokuqinisekileyo ubiza iimpawu zentanda yakhe, othanda ngokukodwa. Ubona uNina intombazana enomdla obonwabela ubomi kwaye uyayixabisa. Umlingisi akayekanga ukunyamekela ubomi bomthandane kunye nokuphila, uthanda isimo sakhe sengqondo. Kwaye ngo-Dobrev, ngu-Ian, njengethemba elipheleleyo, owammothekayo kunye nemvakalelo emihle.
Ngokuqinisekileyo ukuba isibini sinzulu, unokugweba kwiifoto apho esi sibini sizungezwe ngoomama abahamba ngeParis. Nangona umlinganiselo weminyaka elishumi ubudala, u-Nina no-Ian baziva bekunye kunye, kwaye kuya kwenzeka ntoni emva koko, kuya kubonisa ixesha.
Kodwa kuthekani ngoStefan?
Ukuphikisana okuqhubekayo ngenxa yothando oluhle phakathi kukaStefan noDeimon kule nkquthela alunakuphazamisa ubudlelwane phakathi kukaPaul no-Ian ebomini. Kodwa kwakukho konke malunga nokuba uPaul Wesley usenokuba neentombi zenhliziyo kwaye akuyena uNina. Abantu abaninzi bayazi ukuba umlingisi utshatile. Umcimbi womtshato wawuyimfihlelo, kwenzeka ngowama-2010, kwaye kuphela emva konyaka kwi-"Young HollywoodAwards" yembhiyozo, uPawulos wazisa umfazi wakhe othandekayo kwihlabathi. Wayeyimodeli kunye nomdlali wesenzo, uTorri DeVito.
U-Tory ujwayelene nababukeli kwindlalifa kaMelissa kwinqaku elithi "Abakhohlisi Abathandekayo", ngoku kutshanje njengoMeredith kwi "Vampire Diaries". Kuyathakazelisa ukuba imizila yokuthanda uStefan noDkt. Meredith ayithethi, nangona kunjalo, kukho ezimbini izibini ezinothando ngokwenene.
Ibhinqa emehlweni amadoda athandwayo
Umphathiswa uTatyana Arntgolts
Ngomhla oselula uMasako Mizutani
Izibane ze-Kremlin kwiqoqo elixabisekileyo le-Dzhanelli Soviet Memories II
Ukwabelana ngesondo ngomhla wokuqala
Yisiphi isaladi esinokuyilungisa kumkhukhu onokutshaya
U-Jessica Alba uthanda ukuthanda imathematika
Inkukhu kwi-sauce kwi-multivark